14-300 mesh koronto-magneeteedka gaashaanka qurxiya shabag naxaas ah
Mesh silig naxaas ah oo caan ah, mesh filter naxaas, mesh silig naxaas ah jeexjeexida ugu yar waa 3MM, xaashida mesh mesh-ka naxaasta ee feerka waxaa lagu farsamayn karaa wareegsan, oval, square, leydi, saddex xagal, trapezoidal iyo qaabab kale oo gaar ah, siliga qaabka feerka saafiga ah ayaa la soo saari karaa sida ku cad sawirada isticmaalaha.
Sifada mesh gaashaanka naxaasta:
Aan magnet-ka ahayn, xidhashada u adkaysta, ductility wanaagsan.
Tilmaamaha mesh gaashaanka naxaasta ah:
6 mesh/inch——160 mesh/inji ballac: 0.6——1.5m
Mesh Wire Dia. (MM) Furitaanka (mm)
SWG mm inji
8 mesh 23 0.61 0.024 2.565
10 mesh 25 0.508 0.02 2.032
12 mesh 26 0.457 0.018 1.66
22 mesh 30 0.315 0.0124 0.84
30 mesh 32 0.247 0.011 0.573
32 mesh 33 0.254 0.01 0.54
60X50 mesh 36 0.193 0.0076 -
60X50 mesh 37 0.173 0.0068 -
60 mesh 37 0.173 0.0068 0.25
70 mesh 39 0.132 0.0052 0.231
90 mesh 41 0.112 0.0044 0.17
120X108 mesh 43 0.091 0.0036 -
140 mesh 46 0.061 0.0024 0.12
180 mesh 47 0.051 0.002 0.09
Tixgelinta mesh gaashaanka
Tidciga cad iyo twill.
Ku saabsan mesh naxaasta ah
1: Tirada meshes: Shirkadu waxay bixisaa 60 meshes, 80 meshes, 100 meshes, 120 meshes, 150 meshes, 180 meshes, iyo 200 meshes oo kayd ah sanado badan.
2: Qalab: silig naxaas ah, silig naxaas ah oo cas, silig naxaas ah fosfoor
3: Xariirka xariirta: 0.035-20mm. Ballaca shaashadda: 0.8, 1, 1.2, 1.5m. 4: Balladhka: guud ahaan 1X30 mitir.
5: Habka tolnimada: tidmo cad, tolmo.
6: Baakadaha: xaashida duubista gudaha-kraft, balaastig aan biyuhu lahayn. (Waxa kale oo suurtogal ah in la dhoofiyo baakadaha biyaha aan biyaha lahayn iyadoo loo eegayo xaaladaha cimilada gobolka halkaas oo badeecada loo diro).
7: Ujeedo: Baadh dhammaan noocyada kala duwan ee walxaha, budada, dhoobada dhoobada ah iyo dhalooyinka, daabacaadda foornada, dareeraha filter, gaaska, iwm.
Isticmaalka mesh gaashaanka naxaasta ah
Iska ilaali dhammaan noocyada kala duwan ee walxaha, budada, dhoobada dhoobada ah, dhalooyinka, daabacaadda dhoobada, dareeraha filter, gaaska.
Hore: Hydrochloric acid u adkaysta Monel 400 aluminium mesh
Xiga: Alaabta gaarka ah ee 14-300 mesh mesh naxaas ah
1. faa'iidooyinka 316 mesh birta birta ah: 18Cr-12Ni-2.5Mo waxaa lagu daraa Mo, sidaas darteed caabbinta daxalka, caabbinta daxalka atmospheric iyo xoogga heerkulka sare ayaa si gaar ah u wanaagsan. Lagu isticmaalo xaaladaha adag, way ka dhib yar tahay daxalka marka loo eego biraha kale ee chromium-nickel ee ku jira biyaha cusbada, biyaha baaruudka ama cusbada halogen. Iska caabbinta daxalka ayaa ka wanaagsan 304 mesh birta ah, waxayna leedahay iska caabbinta daxalka wanaagsan ee saxarka…
304 ahama bir screen tolmo leh cri Qurxinta ...
Faahfaahinta of silig crimped mesh tirada Wire dhexroor Wire mesh Hole miisaanka dia 14 2,0 ​​21 1 4,2 8 4,05 18 1 15 25 0,50 20 0,61 2,6 23 0,61 18 0,8 3,4 24 0,55 16 0,1 2,5 24 0,55 14 0,12 4 22 0,71 12 0,14 2,94 19 1 2.3 0.18 1.45 6 4.8 1.2 2 20 6 4.8 1 2 20 6 4.8 0.7 3 14 14 2.0 5.08 0.3 silig. Duubka tolmada mesh ee birta naafoobay...